Shashemene - WRSP
1948-1950: Enyere ala na ndị ojii nke ụwa (Shashamene ndị Etiti).
1954: Ndi Etiopia World Federation (EWF) nke izizi si Montserrat biri na Onyinye Ala.
1955: Mayme Richardson, onye nhazi mba ụwa nke mba Etiopia, bịara Jamaica iji kpọsaa Land Grant ma chọọ otu.
1964: Onye mbụ Rastafari nke Etiopia World Federation so na US biri na Shashemene.
1965: Jamaica Rastafari Noel Dyer si UK gaa Ethiopia.
1968: Jamaican Rastafari (Etiopia World Federation ndị otu na ndị na-abụghị ndị òtù) bịarutere na obere ìgwè na Shashemene.
1970: E kewara Shashemene Land Grant n'ezinụlọ iri na abụọ.
1972: Onye mbido nke mbụ sitere na ebo iri na abụọ nke Israel biri na Shashemene.
1974: Mgbanwe nke Etiopia mere ka ndị agha nwee ike.
N'afọ 1975: Emebere ala ime obodo niile, gụnyere Shashemene Land Grant.
1986: Enyere ala na ezinụlọ iri na asatọ na Shashemene.
1992: Ememe nke Centenary of His Imperial Majesty Haile Selassie I (HIM) na Etiopia mere ma ndị mbata maliteghachiri.
2007: Ememe nke puku afọ iri nke Etiopia mere, ọnụ ọgụgụ ndị bịarutere na obodo nta dị na Etiopia rịrị elu.
2018: Rastafari nọ na Etiopia natara akwụkwọ njirimara njirimara (ndị mba ọzọ si Etiopia).
Shashemene bụ aha obodo ahịa ndịda na Ndagwurugwu Rift na Etiopia; ọ dị narị kilomita abụọ na iri ise site n'isi obodo Addis Ababa. Taa, ọ dị na nsọtụ ndịda nke steeti gọọmentị etiti mpaghara Oromia. Obodo a nke abụọ ahụgoro na-eto eto kemgbe afọ ndị 250 wee gụọ opekata mpe ndị bi na 1950 na 150,000, ọtụtụ n'ime ha bụ ndị si mba dị iche iche kwaga Etiopia. Otú ọ dị, a maara Shashemene n'ụwa niile n'ihi ọtụtụ narị Rastafari bụ ndị "mezuru amụma" ma biri ebe ahụ. Ha biri na ala nke Emperor of Ethiopia nyere, Haile Selassie I nyere ha, ha wee bụrụ obodo pụrụ iche nke "ndị lọtara" na kọntinent Africa. N'ihi ya, a na-ejikarị aha Shashemene eme ihe, na Etiopia na mba ụwa, iji kọwaa obodo a na etiti ihe atụ nke ije Rastafari. A na-ukwe ya dịka ndị na-ese reggae, dịka ọmụmaatụ, Sydney Salmon's Shashemene na uche m (Salmon 2000).
Emperor nke Etiopia nyere ala na Shashemene iji kelee “Ndị isi ojii nke ụwa,” ndị otu Ethiopian World Federation (EWF), maka nkwado omume na ego ha n’oge agha ha na Italytali (1935-1941). EWF malitere na New York na 1937 site n'aka onye Etiopia Melaku Beyan iji mee ka echiche ọha mmadụ dị na ịkwado nkwado maka ihe Etiopia. Dị ka ihe ngosipụta inye ndị otu EWF gasha ala, ma ọ bụ hekta narị abụọ. Omenala ọdịnala nke usoro Rastafari na-enye 200 dị ka afọ nke Ala Grant, ebe nchọpụta ochie na-arụtụ aka na 1948. Ala a dị na mpaghara ime obodo na 1950s, mana a ga-ahụ ya ugbu a n'ime oke obodo na nchịkwa. A maara ya n'obodo dị ka "Jamaica sefer" ma ọ bụ agbata obi Jamaica.
Maka ebumnuche dị iche iche metụtara ndọrọndọrọ ọchịchị na -emepụta azịza maka ịlaghachi azụ na Africa n'etiti ndị Africa na-eme na Amerika, mmezi na Shashemene bidoro nwayọ. Ọ malitere site na ndị mbịambịa mbụ Helen na James Piper, [Foto dị n'aka nri] Ndị Juu ojii na Garveyites sitere na Montserrat, na-esite na US na Etiopia na 1948, na Shashemene n'ihe dịka 1954. Ha guzobere ugbo ha na ụlọ akwụkwọ, wee nwee mmekọrịta mmadụ na ibe ya. agbatị na ndị Etiopia gbara ya gburugburu. Ndị Amerịka ole na ole nọ na chọọchị dị iche iche sochiri ha, gụnyere ọkà mmụta ọgwụ Gladstone Robinson, onye mbụ Rastafari si US na 1964, na Baptist Rev. William Hillman si Georgia US na 1965. Ndị ọzọ African American na African Caribbean bi na Etiopia na-adị oge ụfọdụ. ndị ọbịa, na ndị mbido Shashemene gara Addis Ababa oge ụfọdụ, wee gaa njem ụbọchị zuru ezu.
Njem ọhụụ nke Noel Dyer, onye si mba Jamaica Rastafari nke hapụrụ UK na 1964 wee jee Shashemene, gosipụtara okwukwe na oke agụụ nke Rastafari sooro Ethiopia na Shashemene ọfụma. Afọ ole na ole mgbe nleta akara ngosi nke 1966 nke Emperor Haile Selassie I [Foto dị n'aka nri] na Caribbean, otu Rastafari si Jamaica malitere ịbịaru Shashemene. Fọdụ bụ ndị otu EWF ebe ndị ọzọ esoghị. Ha bụ ezinụlọ dị na nwunye, ụfọdụ sistren ole na ole, yana imirikiti ụmụnne, ndị na-ese ihe, ndị na-ewu ụlọ, ndị na-akpụ akpụ, ndị ọkwá nkà na ndị na-eme achịcha. Ndị Rastafari rịọrọ Eze Etiopia arịrịọ n'oge dị iche iche ma nye ha nkwado, ọkachasị n'ihe gbasara ọrụ na ịnweta ala. Na Julaị 1970, e kewara Shashemene Land Grant n’etiti aha mmadu iri na abuo ma obu ezinulo, ebe otutu mmadu n’abia na obodo a, tinyere ndi mbu soro ndi ebo iri na abuo nke Israel zigara. Ndi otu a, ihe omuma nke EWF na ihe omuma di iche, hibere na 1968 na Jamaica site n'aka Vernon Carrington (Gad Gad). Ọ lekwasịrị anya na nlọghachi nke Etiopia, ọ nwere njikọ chiri anya na uto nke egwu reggae. Na 1969, Prime Minista nke Jamaica, Hugh Shearer, na onye ndu mmegide, Michael Manley, gara Ethiopia, ọnụnọ na ọdịbendị nke Rastafari bụ ihe eji eme ihe maka ntuli aka 1972 na Jamaica, nke ndị mmegide socialist meriri.
Obere obodo na-eto eto bi na Shashemene Land Grant nwere mmetụta siri ike site na mgbanwe nke jidere Etiopia wee wepu Haile Selassie nke Mbụ na Septemba 1974. N'agbanyeghị na ha si na ndị dara ogbenye na Jamaica, ndị Rastafari bi na-amata ka ndị na-erite uru na Crown na Etiopia. , na dịka nke a egwu egwu nke ike ọchịchị na-eyi egwu ozugbo. Ka ọ na-erule ọnwa Machị 1975, ndị agha ndị ọchịchị na-achị Etiopia (nke a kpọrọ Derg) mere ka ala ime obodo niile dị na mba ahụ, gụnyere Shashemene Land Grant. Ebumnuche Pan African nke onyinye a ebughi n'ihu mgbanwe mgbanwe mmekọrịta mmadụ na Etiopia. Ndị Rastafari tụfuru akụkụ ka ukwuu nke ala ahụ, nweta ụlọ ole na ole, ọtụtụ kpebiri ịhapụ mba ahụ. Naanị mmadụ ole na ole n’ime ndị otu na-eto eto sitere na ebo iri na abụọ nke Israel bịarutere n’ọgwụgwụ 1970s. Ha lanarịrị na ọnọdụ nke agha obodo, usoro iwu, na nri, na ndị ọbịa ole na ole, gụnyere Bob Marley na Disemba 1978. N'isochi arịrịọ dị iche iche nye gọọmentị, ụfọdụ ala na Shashemene mechara nye ya na 1986 maka ezinụlọ iri na asatọ iji mee ka obi dị jụụ ọnọdụ obibi ndụ ha.
Site na mgbanwe mgbanwe nke ọchịchị na 1991, njikọta mba nke Rastafari haziri na Etiopia otu emume were izuụka atọ maka ụbọchị ncheta ọmụmụ ụbọchị Sela Selaresie (1892). Site na Shashemene ohuru na ihe omuma nke diasporic, ndi rutere diasporic bidoro na elu na 2000 na 2007, afọ puku afọ na Gregorian na kalenda Julian (nke ikpeazụ a na-eji na Etiopia). Akụkụ dị egwu nke iri afọ ndị a bụ mmụba dị iche iche nke "ndị lọtara" na Shashemene, onye na-esiteghị na Jamaica, kama site n'ọtụtụ ebe ndị otu Rastafari si wee too. Ewelitela EWF na UK n'oge 1980s, na ebo iri na abụọ nke Israel emepewo ngalaba iri na abụọ mba. Yabụ, Rastafari si na agwaetiti Caribbean niile, na site na obodo ndị ọdịda anyanwụ (US, UK, Canada) bidoro ịbịa Shashemene. Na mgbakwunye, abụọ “ụlọ” akụkọ ihe mere eme nke Rastafari na Jamaica, Theocratic Order of Nyahbinghi na Ethiopia Africa Black International Congress (EABIC, nke a makwaara dị ka Bobo Ashanti), zigara ndị otu ka ha biri na Shashemene.
Ọ bụrụ na Shashemene na-anọchite ụdị nnabata, [Foto dị n'aka nri] ọ bụ nke nwere oke mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Site na Rastafari nke ihe dika obodo iri na ise na otutu ulo ndi Etiopia, o bu obodo ndi mmadu nwere mmekorita siri ike na ndi ezin’ulo ndi ozo na ndi Rastafari n’uwa nile. Ebe obibi agbata obi agwakọtara, Rastafari na ndị Etiopia bi n'otu okporo ámá, ma n'ezie, ọnụ ọgụgụ ndị Etiopia na-eto ngwa ngwa karịa ọsọ nke Rastafari. Rastafari na Shashemene anaghị anọchite mpaghara dị iche na gburugburu ha, ha jikọtara ya na akwa mpaghara, nke na-adịgide n'okpuru nchịkwa nke nchịkwa Etiopia na ndị mmadụ.
Ndị izizi biri na Shashemene Land Grant bụ ndị Black Black si US, akụkọ ọdịnala ekwuola na ndị Alakụba ojii bịakwara na ngwụcha 1950. Otu n'ime ndi mbido biri bu onye ozi Baptist, site na US. Okpukpe okpukpe a dị iche iche na-egosipụta njirimara nnabata nke EWF n'oge mmalite ya. Nke a bụ ihe pụtara ìhè nke EWF na US wee rue ngwụsị afọ ndị 1950, ruo mgbe Onye nhazi mba ụwa Mayme Richardson si New York ruo Jamaica na 1955 na-achọ ịmegharị ndị otu EWF. Ka ọ na-erule mgbe ahụ, Jamaican Rastafari bụ ndị gbalịsiri ike ịbanye na EWF ka e nyere ikike ma mepụta alaka ụlọ ọrụ ha nke EWF na Kingston. Ndi otu mbu nke Jamaica Rastafari biri na Shashemene sitere na ngalaba ndi a. Ndị otu ebo iri na abụọ nke Israel sochiri ha bụ ndị ka na-anọchite ọnụ ọgụgụ ọnụọgụgụ na Onyinye Ala Shashemene. Mgbe nke ahụ gasịrị, Rastafari na-anọchite anya "ụlọ" dị iche iche (dị ka Theocratic Order of Nyahbinghi na Ethiopia Africa Black International Congress) biri, yana ndị na-abụghị ndị mmekọ Rastafari.
Taa, obodo Shashemene bụ obodo Rastafari, nke nwere okpukpe na njikọ dị iche iche, yabụ na-egosipụta ọtụtụ nkuzi na nkwenkwe ndị na-egosipụta mba Rastafari. N'agbanyeghị nke ahụ, ha niile na-eto Eze ndị Eze, Onyenwe anyị Ndị nwenụ, Na-enwe Ọdụm nke Juda, Emperor Haile Selassie I; na ha gosipụtara ịhụnanya miri emi maka Ethiopia yana nkwenye siri ike na mgbapụta site na nlọghachi Africa. N'ụzọ ihe atụ, ha na-atụle Africa dị ka Zaịọn (ala dị nsọ ebe Chineke bi), [Foto dị n'aka nri] nke na-eguzogide oghere Western, ụkpụrụ na ụlọ ọrụ a na-akpọ Babilọn (ebe ije biri na mbibi). Karịa obodo ọ bụla ọzọ, Rastafari nwere nkwupụta doro anya na Shashemene: Haile Selassie I, Chineke ha na Eze ha nyere ala, onye bụ isi nke mbara igwe ha na ụwa. N'ihi ya, ha na-echegbu onwe ha nke ukwuu wee ruo eruo inweta ya.
A na-eme kalenda Rastafari na Shashemene, ụbọchị abụọ ọkachasị na-adọta ma ndị obodo ma ndị mba ụwa na obodo: July 23, ụbọchị ọmụmụ (ụbọchị ọmụmụ) nke Emperor Haile Selassie I, na Nọvemba 2, echichi nke Emperor Haile Selassie I. Ndị ọzọ significantbọchị ndị dị mkpa gụnyere Empress Menen Asfaw Earthday (Eprel 3), Marcus Garvey Earthday (August 17), yana Ekeresimesi Etiopia (Jenụwarị 7) ma ọ bụ Afọ Ọhụrụ (Septemba 11). Rfọdụ Rastafari, ọkachasị ndị Bobo (EABIC), na-edebe ụbọchị izu ike.
Ebe ofufe bụ isi bụ Nyahbinghi Tabernacle, [Foto dị n'aka nri] oghere dị okirikiri, ebe a na-akụ mkpọmkpọ ebe nke Rastafari, na igodo Fire. Dabere na ọnụnọ na njikọ nke ndị bi na ya, a na-eme nnọkọ kwa izu ma ọ bụ kwa ọnwa, na mgbakwunye na ememme isi nke kalenda Rastafari. Ndị Bobo nwere ọrụ aka ha, n'ogige Bobo nke nwere ọnọdụ dị iche iche n'oge.
Nzukọ a na-enwe mgbe niile, egwu na ntụrụndụ na-ewere ọnọdụ mgbe niile na Agbụrụ iri na abụọ nke Israel HQ na EWF HQ. N'oge ụfọdụ, dị ka ememme July 23, ụbọchị nwere ike ịmalite site na mmemme na ernlọikwuu ma mechaa n'ime abalị na usoro ụda ma ọ bụ egwu reggae na Qlọ Iri na Abụọ. N'ụbọchị ahụ, a haziri ụgbọ okporo ígwè na drum, ọkọlọtọ na ezinụlọ na-arịgo na gwongworo mara mma nke ga-eji nwayọ na-ebugharị site na agbata obi na etiti obodo Shashemene na azụ, si otú ahụ gosipụta ọnụnọ Rastafari na ihe ịchọ mma maka ndị Etiopia.
Nnochite anya obodo nke Shashemene abụwo ihe esemokwu. Otu dị iche iche nke EWF emegidela ibe ha ogologo oge, ebe EWF nwere iwu ziri ezi na Land Grant, ndị otu agbụrụ iri na abụọ abụwo ọnụọgụ ọnụọgụ kemgbe 1970s. Dị ka ọ dị taa, ọtụtụ mkparịta ụka na usoro vis-à-vis nke ọchịchị obodo na nke mba Etiopia na-agbaso ụzọ abụọ, otu site na EWF, bụ nke a na-eme ugbu a site na onye ndu dị ike, na nke ọzọ site na Agbụrụ iri na abụọ nke Israel.
Enwekwara otutu ndi otu ndi otu. Onye kacha ochie bụ Jamaica Rastafari Development Community (JRDC), nke rụọ ọrụ kemgbe mmalite 2000s. Ọ na-achịkọta ụlọ dị iche iche Rastafari dị na Shashemene, ewezuga EWF, ma nwee ụlọ akwụkwọ praịmarị na nke sekọndrị. Organizationstù ndị ọzọ dịte aka; ma ụfọdụ na-atachi obi, dị ka Oge Ochie, nke lekwasịrị anya na nlekọta okenye, yana Positive Action Charity Organisation, nke na-elekọta ụlọ akwụkwọ Yawenta. Ọzọkwa, ọtụtụ ụlọ ọrụ na mba ofesi na-akwado atumatu mpaghara, dị ka Shashemene Foundation na IDOR na US, Sick Be Nourished na UK, na Yawenta France, si otú a na-edepụta Shashemene ma na mpaghara ma n'ohere diasporic.
Ndị obodo Shashemene na-eche ọtụtụ nsogbu aka. Fọdụ bụ nsogbu dị n'ime, metụtara njikọ nke obodo nke ndị mmadụ sitere na nzụlite dị iche iche ma jikọta okwukwe na ahụmịhe. [Foto dị n'aka nri] Ọtụtụ nsogbu n'agbanyeghị na metụtara gburugburu Etiopia: ịlanarị akụ na ụba na ijikọta mmekọrịta obodo bụ isi okwu. Ọtụtụ ndị na-alọghachite azụlite azụmaahịa dị iche iche, wee nwee nka bara uru iji mejuputa, mana ego na isi obodo maka itinye ego na-esikarị ike. Ọzọkwa, ọ bụ ezie na ohere ọrụ dị ụkọ, ọnụahịa nke ọrụ na-abụkarị nke ukwuu n'okpuru ụkpụrụ ụwa. Obodo a anwụghị mgbanwe (1974), agha obodo na mgbanwe mgbanwe ọchịchị (1991). Ọ naghị arụsi ọrụ ike na ndọrọ ndọrọ ọchịchị mba Etiopia, mana ọ na-esonyekarị ya na okpueze Etiopia, n'ihi ya, ọ na-ezute iro nke ndị agbụrụ Oromo bụ ndị na-ele ndị bụbu Menelik na Haile Selassie anya dị ka ndị colonialist. Shashemene, dị ka obodo ukwu dị na ndịda Oromia, na-ahụ mgbawa ugboro ugboro nke ọgba aghara ndọrọ ndọrọ ọchịchị na agbụrụ dị ukwuu na-akpali. Ọgba aghara ndị a anaghị emetụta ndị obodo Rastafari ozugbo, mana ọ ka bụ obere obodo na-enweghị nsogbu na anụ oriri dị mfe maka nnabata ala na usoro omume nrụrụ aka obodo.
Nkwuputa 2017 nke gọọmentị Etiopia na Rastafari bi na Etiopia ga-enye ikike ikike ibi n'ụlọ ka etinyere n'ime afọ ole na ole na-esote, na-egosi isi ihe na njikọ iwu nke ndị Rastafari bi na Etiopia. Maka Rastafari na ụmụ ha, mgbe ọtụtụ iri afọ na-enweghị akwụkwọ na enweghị ikike iji biri ma ọ bụ ịnweta ụmụ amaala Etiopia, mmata a na-ahụkarị nwere ume. N'agbanyeghi mmeghari a di mkpa, onodu kariri mba di elu banyere “ndi laghachiri” site na mgbe ochie Afrika ndi no na Africa ka bu nsogbu a na-enwetaghi banyere oke ruru mmadu. Okwu a dị n'isi nke mkparịta ụka nke oge a na mgba maka ịkwụ ụgwọ maka ịgba ohu.
Foto #1: Helen Piper, Gladstone Robinson, na James Piper n'ihu ụlọ Pipers na Shashemene, ca. 1965. Ebe ndebe ihe nzuzo, G. Robinson.
Image # 2: Emperor Haile Selassie nke Mbụ.
Image # 3: Nnọọ akara na mbata nke obodo Shashemene.
Foto # 4: Ihe osise nke Rastaman na ihe osise sitere n'ike mmụọ nsọ nke Etiopia.
Foto # 5: Tablọikwuu Nyahbinghi na Shashemene.
Foto # 6: Nzukọ obodo Shashemene.
Nzukọ obodo na ụlọikwuu ahụ
** Ọ gwụla ma edeghị ya, ọdịnaya nke profaịlụ a na-esote Giulia Bonacci, Ọpụpụ! Ndị nketa na ndị ọsụ ụzọ, Rastafari laghachi na Etiopia, Mahadum nke West Indies Press (2015).
Aaron, David. 2020. "Site na Babilọn rue Etiopia: Ọga na Mgbanwe nke Utopianism na Rastafari Reggae Music." Egwú na Society na-ewu ewu. Nweta site na https://doi.org/10.1080/03007766.2020.1795480 na 15 December 2020.
Bonacci, Giulia. 2018. "'Ọ Ga-eme Nnọọ Mmụọ Nsọ nke Maazi Garvey': Helen na James Piper na Nlaghachi na Etiopia." Akwụkwọ bụ International Journal of African Historical Studies 5: 293-31.
Bonacci, Giulia. 2016. "Nlaghachi na Etiopia nke ebo iri na abụọ nke Israel." Ntuziaka New West Indian 90: 1-27.
Bonacci, Giulia. 2015. Ọpụpụ! Ndị nketa na ndị ọsụ ụzọ, Rastafari laghachi na Etiopia. Kingston, Jamaica: Mahadum nke West Indies Press.
Bonacci, Giulia. 2013. "Etiopia World Federation: Otu Pan-Africa Organizationtù n'etiti Rastafari na Jamaica." Caribbean nkeji iri na ise 59: 73-95.
Christian, Ijahnya. 2018. “Enweghị Mbugharị, Mbughachi. Ọhụụ ime mmụọ na njedebe ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke mbughachi Rastafari. ” Pp. 316-32 na Akwụkwọ Routledge nke Ọchịchị Postcolonial, nke Olivia U. Rutazibwa na Robbie Shilliam dere. London: Ntughari.
Gomes, Shelene. 2018. "Counter-Narratives of Belonging: Rastafari na Ala Nkwa ahụ." The South South 12: 112-28.
MacLeod, Erin. 2014. Ọhụụ nke Zaịọn: ndị Etiopia na Rastafari na forchọ Ala Nkwa ahụ. New York: New York University Press.
Niaah, Jahlani. 2012. "Ọnụnọ Rastafari nọ na Etiopia: Echiche nke Oge a." Pp. 66-88 na Rastafari na Narị Afọ Iri Ọhụrụ, nke Michael Barnett dere. Syracuse: Syracuse University Press.
Salmọn, Sydney. Shashemene na uche m. Nweta site na https://www.youtube.com/watch?v=YdvnENC_u0E na 15 December 2020.